Incwadi entsha kaMartin Vrijland 'Eyona nto siyibona ilungele ukuhanjiswa! : UMartin Vrijland
Lifikile ixesha lokuba incwadi entsha 'Eyona nto siyibonayo'. Izolo ndibonelele abafundi incwadi ye-Ebook Reader (okanye i-e-Reader ukuba uyafuna) nakwi-PDF version. Ukusukela ngoku uhlobo lwephepha elibuyela iphepha liyafumaneka nge-webshop zibelken.nl ngexabiso le- € 24,95. Apha ngezantsi usenokuba lilungu kwaye ufumane inguqulelo yomfundi kunye nokufunda ingxelo yePDF. Awunaso i-Ebook Reader? Ke kwiikhompyuter ezininzi, iilaptops okanye i-i-pads unokuhlala ufunda le nguqulelo ye-Ebook Reader. Ukuqiniseka, ndikwafaka ingxelo yePDF ukuze ukwazi ukuyifunda kwi-Intanethi kwisixhobo osithandayo. Oko kunokwenzeka nakwi-i-Pad okanye kwifowuni yakho.
Incwadi inika isishwankathelo esihle sobunyani bokwenyani kunye nokuQokelelwa kweQonga likaTruman apho uluntu lubanjelwe khona ngokusuka kwinkqubo ukusuka kubuntu ukuya engcwabeni. Incwadi ibonelela ngesiqinisiso esichaziweyo, kodwa ngaphezulu kwayo konke kuya nesisombululo esicacileyo.
Wonke umntu ufumana iifom zenkqubo ukusuka kubhuleko ukuya engcwabeni. Le ncwadi ibonisa indlela eyilwe ngayo le nkqubo, indlela eyakhiwa ngayo amandla elizwe kunye nendlela abantu abaphethwe ngayo kumdlalo odibeneyo weTruman (emva kwefilimu enegama elifanayo ukusuka kwi-1998) kwintsebenziswano phakathi kweendaba, ezopolitiko kunye neqela eliphikisayo. Icacisa inyani njengoko siyibona kwimodeli yethiyori yokulinganisa esekwe 'kukuzihlola kabini izilingo', ubungakanani befizikhi kunye nembono yokwazi. Isimangalo kuye nabani na obandakanyeka kwisazela, inkolo, ukomoya kunye nezopolitiko.
Injongo yam yayikukubhala incwadi enokuthi ifundwe ngokomgaqo-siseko kunye nokuba ungayinika usapho okanye abahlobo ukuba babenze bacinge. Siphumelele. Incwadi inamaphepha e-148 kwaye ke kulula ukuyifunda ngosuku.
Ukuba sele ulilungu lonyaka kwaye ufuna ukufumana incwadi ngohlobo lwephepha, nceda undithumelele i-imeyile kwidilesi yakho.
Apha ngezantsi unokukhuphela uguqulelo lwe-Ebook Reader okanye ufunde ingxelo yePDF. Unokufikelela kuzo zombini iifayile emva kokuba ulilungu. Ukufikelela kunikwe igolide kunye nabo bonke ubulungu bonyaka. Kulawo malungu kuphela amakhonkco encwadi ezantsi kweli nqaku abonakalayo. Abanye babona iqhosha lobulungu. Xa usiba lilungu, ubhalisa njengomnikeli, ondixhasa ngayo ukuze ndiqhubeke nomsebenzi wam. Enkosi kakhulu ngaloo nto!
Hlaziya i-5 ngo-Novemba 2019, 15: ixesha le-30: ngoku ungayalela uguqulelo lwe-e-umfundi kunye ne-PDF nge-webshop phantsi kweqhosha eliluhlaza.
Ukuba, umzekelo, uxhase ngokudluliselwa kwemali yasebhankini okanye ubulungu benyanga kangangexesha elithile kwaye ufuna ukwazi ukuyifunda incwadi, nceda unxibelelane nathi ngefom yoqhakamshelwano. Isizathu sokuba ndibeke le isithintelo kungenxa yokuba abantu banokufunda incwadi yam ye- $ 2 ngokuqala ukuba lilungu lenyanga emva koko bacime kwakhona ubulungu.
tags: ncwadi, de, le, eziziimbalasane, kennen, Martin, ilizwe elikhululekile, inyani, nathi, njenge
5 Novemba 2019 kwi-21: 12
Ngale ndlela ndingathanda ukuvuyisana nawe ngokunyamezela nokuzibophelela kwakho kwigama elizimeleyo
Uyenze ukuba ifikeleleke kuye wonke umntu ekwimo yeencwadi.
Ngokoluvo lwam, udinga isimo sengqondo esiqinileyo kunye namandla amakhulu okubuyisela
Abantu abangazi nto konke konke ukuze babonise ukuba bangcungcuthekiswa njani kwaye baphathwe njani
amandla enkanuko kweli lizwe nakwenye indawo.
kwaye nemincili ngencwadi yakho
6 Novemba 2019 kwi-15: 09
Andenzanga yonke loo ngxaki yeminyaka ye-7 yokuncamathela intamo yam kwaye ngokuqinisekileyo amaqanda anomoya awazange ayibeka kum. Ngokuchasene noko ... oko kundibize kakhulu.
Khange ndiyibhalele le ncwadi, kodwa ngokuchanekileyo kwaye kuphela kubo bonke abantu abangathanda ukuba nento yokubanika abo bayaziyo ngemeko sikuyo.
6 Novemba 2019 kwi-15: 46
Molo Martin, sele uyiyalile incwadi yakho entsha.
Halala kwaye uqhubeke ngolwazi! Iyimfuneko nje.
« Amaziko lolutsha avakalisa umsindo malunga nobundlongondlongo ngenxa yokuba 'ukukhathalela' kuhlukumeza?
I-Adobe, i-Twitter kunye namajelo eendaba aphambili aza kulwa neenkcukacha ezinzulu? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.011.410